Yakazara Rondedzero yeShanduko OST Faira Zvikanganiso uye Matambudziko
musha Products DataNumen Exchange Recovery Zadza Rondedzero Yezvikanganiso
Exchange OST Faira Zvikanganiso uye Matambudziko
Zadza Rondedzero Yezvikanganiso uye Matambudziko Mukutsinhana OST Files
Paunoshandisa Microsoft Outlook kuvhura huori or nherera offline fodhi (OST) Faira, kana kuiendesa pamwe neSeva yekuchinjana, iwe unosangana nemhando dzakasiyana dzemishumo, idzo dzinogona kunge dzichikuvhiringidza kwauri. Naizvozvo, pano isu tichaedza kunyora zvese zvingangoitika zvikanganiso, zvakarongedzwa zvinoenderana neyakaitika frequency. Pamhosho yega yega, isu tinotsanangudza chiratidzo chayo, tsanangura chikonzero chaicho uye nekupa mhinduro yacho, kuti iwe ugone kuvanzwisisa zviri nani. Pazasi isu tinoshandisa 'filename.ost'kuratidza yako Yakakanganisa Shanduko OST zita refaira.
"Haugone kuvhura yako default email maforodha. Iyo faira xxxx.ost haisi faira rekunze."
"Kutadza kuwedzera folda. Iyo seti yemafolda haigone kuvhurwa. Zvikanganiso zvaigona kunge zvakaonekwa mufaira xxxx.ost. Regedza ese maapplication-anotumirwa netsamba, wobva washandisa Inbox Kugadzirisa Turu."
Kusangana nenhamba huru yezvinhu zvekupokana.
Haugone kuvhura zvimwe zvinhu zveOptlook kana zvisiri pamhepo.
Zvikanganiso zvakasiyana kana uchienzanisa Exchange Server bhokisi retsamba neako OST ikwidzwe.
Zvakare, kana uchishandisa isingabvumirwe folda (OST) faira neMicrosoft Exchange server, unogona zvakare kusangana nezvinotevera kazhinji, izvo zvinogona kugadziriswa ne DataNumen Exchange Recovery nyore.
Maemail nezvimwe zvinhu muExchange mailbox zvinobviswa nekukanganisa.
Shandura Exchange OST faira kune Outlook PST faira.
Shanduro parizvino iri mumodi yekudzosa.
Oversized OST dambudziko refaira (OST saizi refaira rinosvika kana kupfuura muganho we2GB).